Falastiiniyiinta ku nool koonfurta Marinka Qasa oo Ka Gadooday Hadalkii Trump, Dab-na qabad-siiyey Sawiirada Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Trump Iyo Calanka Yuhuudda
Thursday December 07, 2017 - 01:42:20 in Wararka by Super Admin
Washington(Xogreebnews.com)- Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa aqalka Cad ee Mareykanka kaga dhawaaqay inuu u aqoonsaday magaalada uu muranku ka taagan yahay ee Qudus ay tahay Caasimadda Israa’iil, go’aankaas oo ah mid meesha ka saaraya siyaasaddii uu Maraykanku ku socday tobanaan sano.
Waxa kale oo shaaciyay in safaaradda Maraykanka laga rari doono magaalada Tel Aviv oo loo rari doono Quddus. Wuxuu Trump sheegay in go’aankaas aan loola jeedin in maraykanku uu faraha ka qaaday sidii ay uga go’nayd in nabad waarta laga gaadho bariga dhexe.
Falastiiniyiinta ku nool koofurta marinka Qasa oo hadalkaas aad uga cadhaysan ayaa gubay sawirka Mr Trump, kan Ra’iisul wasaaraha Israa’iil iyo calanka Yuhuudda. Falastiiniyiin caraysan oo gubay sawirrada Trump iyo Netanyahu. Mr Trump wuxuu sheegay in uu diyaar u yahay inuu taageero xalka labo dal oo lagu dhammeeyo khilaafka muddada dheer ka dhex jiray Israa’iil iyo Falastiin.
In yar ka hor intii aanu go’aankaas ku dhawaaqin ayuu madaxweyne Trump sheegay in tallaabadan ay ahayd inay goor hore dhacdo.
Calanka Israa’iil oo gidaar lagu shiday Qaybta qaddiimiga ah ee Qudus ayaa gidaar ku yaalla waxaa lagu shiday calanka Israa’iil ka hor intii aanu Donald Trump ku dhawaaqin go’aankiisa.